Xujayda reer Qadar oo sanadkan si bilaash ah ku xajinaya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARIMAHA DIINTA Xujayda reer Qadar oo sanadkan si bilaash ah ku xajinaya
Boqortooyada Sacuudiga ayaa sanadkaaan ilaaTodoba Duulimaad u qorsheysay Xujeyda dalka qadar ee gudanaysa waajibaadka Xajka.
Duulimaadyadaasi ayaa la qorsheeyay in ay socdaan inta u dhaxeysa 22- 25ka bishan aynu ku jirno ee Augosto,kuwaas oo Xujeyda laga soo qaadayo Garoonka Caasimadda dalka Qadar ee Doxa,iyagoo la keenayo Garoonka Diyaaradaha caalamiga ee Boqor C/casiis Ala sacuud ee magaalada Jeddah.
Warku wuxuu intaa ku daray in dulimaadka xujeydaasi dib loogu celinayo wadankooda Qadar uu isna bilambi doono 5-ta bisha Setember ee soo socota,waxaana kharashka ku baxaya xujeydaasi qadariyiinta sanadkan kafaala qaaday Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan bin C/casiis.
Dhanka kale hay’adda guud ee Diyaaradaha Rayidka ah ee sacuudiga ayaa garoomadeeda ugu qorsheysay soo dhaweyn wanaagsan Xujeyda Sanadkan gudaneysa waajibaadka Xajka oo ka kala imanaya dunida dacladaheeda.
Previous articleSacuudiga oo sheegay inuu soo geba gebeeyay diyaar gorowga marti galinta Xujaayda
Next articleTurkiga oo rumeeyay riyada nin u dhashay dalka Ghana